प्रतिनिधिभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ ? - गोकर्णेश्वर खबर
प्रतिनिधिभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ ?
गोकर्णेश्वर खबर२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १४:५४ मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि) ९३ पाठक संख्या
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले स्वाभाविक रुपमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिएकाले विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
‘प्रतिनिधिभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ र ? राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा नगइकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ?’, इजलासमा उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन विघटन गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नगएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत छ कि छैन भनेर थाहा पाउन नसक्ने उनको जिकिर छ । ‘प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमै नजाने अनि मसँग विश्वासको मत छ भनेर राष्टपतिकहाँ जानुहुन्छ ? विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ हुन्छ कि आइसीसी हलमा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन नसक्ने उनले दोहोर्याए । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने बताए ।